निखिलको सम्झना : सुटिङमै सबैले हिरो भनेर मख्ख पारिदिन्थे- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
निखिलको सम्झना : सुटिङमै सबैले हिरो भनेर मख्ख पारिदिन्थे
असार ५, २०७७ रीना मोक्तान
काठमाडौँ — अभिनेता निखिल उप्रेती एक समयका व्यस्त कलाकार हुन् । डेब्यू फिल्म 'पिँजडा'मा सात तलाबाट हाम फालेर 'एक्सन' गरेकै कारण एकाएक उनी चर्चामा आएका थिए । बलिउडमा लामो समय कामको अनुभव बटुलेर नेपाली फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गरेका निखिका ३५ वटा फिल्म लगातार बक्स अफिसमा हिट सावित भए ।
अहिले निखिलले फिल्मको सुटिङ नगरेको तीन वर्ष भइसक्यो । फिल्म क्षेत्रबाट टाढा रहे पनि निखिलको स्मृतिमा त्योबेलाका सुटिङका रमाइला क्षणहरु ताजै छन् ।
सुटिङमा रमाइलो गर्थे निखिल । क्यामेरा र रिफ्लेक्टर देख्नेबित्तिकै उनलाई आनन्द लाग्थ्यो । सबैजनासँग घुलमिल गर्नेपर्ने स्वाभावका थिए उनी । त्यतिबेला सुटिङस्थल वनभोजझैं हुने उनको अनुभव छ । 'म त जहाँ काम गर्छु त्यहाँ रमाइलो गर्नुपर्ने स्वभावको छु । त्यतिबेला सुटिङ सधैँ पिकनिक जस्तै हुन्थ्यो । सुटिङमा एक त सुन्दर ठाउँमा लगिन्छ,' उनले भने ।
सुटिङस्थलमा दर्शकहरु उनलाई नै हेर्न झुम्मिन्थे । विशेष मानसम्मान पाउँथे । 'हिरो' भएपछि त सुटिङ सेटमा उनको सान बेग्लै हुन्थ्यो । 'सुटिङमा हिरो भनेर मख्ख पारिदिन्छन् । सुटिङ नगरेको यत्रो वर्ष पनि ती दिनहरु सम्झँदै मख्ख पर्छु म,' उनले सुनाए । २० वर्ष यस क्षेत्रमा सक्रिय रहँदा उनलाई सुटिङका लागि मनपर्ने स्थान बन्यो पोखरा । आफ्नो ५० भन्दा बढी फिल्मको सुटिङ पोखरामै गरेको उनी सुनाउँछन् । त्यसैले पोखरासँग सुटिङका धेरै यादहरु रहेको उनी बताउँछन् । 'पोखरामा गइसकेपछि छेउको जोमसोम जान पाइन्थ्यो । मलाई त सुटिङ त्यसैले जहिल्यै पोखरामै होस् भन्ने लाग्थ्यो,' निखिल भन्छन्, 'त्यो सानो सहर त्यहीमाथि आवादी पनि कम । मेरो त स्वाभाव नै एक्लै शान्त ठाउँमा बस्ने भएकोले गर्दा पनि जनसंख्या कम भएको ठाउँ मेरो मनपर्ने ठाउँमा पर्थ्यो ।'
सुटिङ भन्नेबित्तिकै निखिल एउटा घटना कहिल्यै बिर्सँदैनन् । तीनताका निखिल निकै व्यस्त हुने गर्थे । एकैदिन ३/४ वटा फिल्मको सुटिङ भ्याउँथे । उनकै शब्दमा भन्नुपर्दा भयंकर ठूलो मान्छे भइसकेका थिए । त्यसदिन पनि एउटा फिल्मको सुटिङ सकेर अर्को फिल्मको सुटिङमा हतारहतार गर्दै पुगे उनी । त्यतिबेला पहिरनको जिम्मा कलाकार आफैले सम्हाल्नुपर्थ्‍यो । अभिनेत्री सञ्चिता लुइँटेलसँग स्क्रिन सेयर गरेर अर्को सेटमा अभिनेत्री रेखा थापासँग अभिनय गर्नुपर्थ्यो निखिललाई । उनले त्यसदिन एउटै पहिरनमा दुई वटा फिल्मको सुटिङ भ्याए । दुवै फिल्ममा उनले निभाएको पात्रको नाम एउटै थियो । पछि उनले चाल पाए त्यो दुवै फिल्म एउटै विदेशी फिल्मको कपी थियो ।
'एउटा सुटिङबाट अर्को सुटिङमा जाँदा एउटै फिल्मको सुटिङ गरिरहेको रहेछु । एउटै सोर्स परेछ,' उनी पुराना दिनको सम्झना गर्छन्, 'एउटै फिल्मको कपी पर्देछ । ती दुवै फिल्मको सुटिङ एकैदिन भयो कस्तो सञ्‍जोग !'
नेपाली फिल्मकर्मीले विदेशी फिल्मको कपी गर्दै नेपाली फिल्म निर्माण गर्दै आएको कुरा नौलो होइन । नेपाली फिल्मकर्मीको यो प्रवृतिसँग जानकार थिए निखिल । आफूले विदेशी फिल्मको हुबहु कपी गरिएको दुई फिल्ममा काम गर्दा पनि उनले निर्माण टिमसँग यसबारे छलफल गर्ने सोचेनन् । 'मानौं सय साथीको अनुहारमा डन्डिफोर आएको छ भने मैले त्यहाँ डन्डिफोरको कुरा उठाउनु नै बेवकुफी हुन्थ्यो । भन्नुको अर्थ सबैले कपी गरेरै फिल्म बनाउँथे । अनि कपीको कुरा गर्नु नै बेवकुफी हुन्थ्यो,' नेपाली फिल्म क्षेत्रको तितो यथार्थबारे उनले भने, 'यहाँ त विदेशी फिल्मको कपी गर्नु बाहेक आफ्नो दिमाग लगाउँदैनन् ।'
यसरी विदेशी फिल्मबाट चोरेर बनाइएको फिल्म पर्दामा आउँदा निखिल धेरै पटक विवादमा तानिन्थे । दुई वटा फिल्ममा एउटै पहिरन पहिरिएका कारण पनि उनको विवाद हुन्थ्यो । निखिलले सुटिङका क्रममा यस्ता थुप्रै घट्नाको सामना गरेका छन् ।
निकै व्यस्त सेड्यूलमा काम गर्दा निखिलको समयलाई मध्यनजर गर्दै सुटिङ सेट तयार पारिन्थ्यो । एउटै ठाउँमा दुई फिल्मको सुटिङसमेत गरेका छन् निखिलले । 'बालाजुमा सुटिङ गर्दाखेरी स्टुडियो बाहिर एउटा सुटिङ हुन्थ्यो भित्र अर्को सुटिङ । ढोकाभित्र एउटा, ढोकाबाहिर अर्को सुटिङ,' उनी भन्छन् ।
यसरी स्टुडियोभित्रको सुटिङ सकेर उनी बाहिर सुटिङ गर्न आउँथे । भित्रको सुटिङ सेटमा कपाल जेल लगाएर लप्पकै पार्थे । बाहिर सेटमा कपालको स्टाइल धुएर सुख्खा बनाउँथे । भित्रको सुटिङ सक्नासाथ बाहिर तातोपानी र ड्रायर लिएर मेकअपम्यानहरु तयार अवस्थामा खडा भएर बसेको अझै सम्झनामा छ । 'यस्तै १२ वर्ष अगाडिको कुरा हो यो । यो त्यतिबेलाको घटना हो जब देशमा अधिकतम बन्द हुन्थ्यो,' उनले सुनाए, 'निर्माण टिमहरु मेरो समय अनुसार लोकेसन सेट गर्दै हिँड्थ्यो । सुटिङ त्यसरी हुन्छ भनेर मलाई थाहा थिएन । तर मेरो सेड्यूल मिल्दैन भनेपछि मेरो व्यस्तताको हिसाबले सुटिङ लोकेसन बन्थ्यो ।'
प्रकाशित : असार ५, २०७७ १५:१८
असार २, २०७७ रीना मोक्तान
काठमाडौँ — बलिउड अभिनेत्री कंगना रनावतले हालै सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा एक भिडियो सार्वजनिक गर्दै अभिनेता सुशान्तसिंह राजपुतको आत्महत्याको पछाडि बलिउडमा व्याप्त नातावाद रहेको आरोप लगाएकी छिन् ।
७ वर्षे फिल्म यात्रामा बलिउडले सुशान्तलाई कुनै प्रोत्साहन नगरेको भन्दै उनको आत्माहत्यामा नातावादले पनि भुमिका खेलेको बताएकी छिन् ।
'केही व्यक्तिहरु जसको दिमाग कमजोर हुन्छ उनीहरु डिप्रेसनमा आत्महत्या गर्छन् भनेर स्थापित गर्न खोज्दैछन् । जो व्यक्तिले प्रवेश परिक्षामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याएको छ त्यो व्यक्ति कसरी कमजोर हुन सक्छ,' भिडियोमा उनले भनेकी छिन्, 'उसको अन्तिम पोस्टहरु हेर्दा क्लियर हुन्छ । उसले भनिरहेको थियो, प्लिज मेरो फिल्म हेर्नुस्, यो इन्डस्ट्रीमा मेरो कुनै गडफादर छैन । मलाई यो इन्डस्ट्रीबाट बाहिर निकालिनेछ ।'
कंगना थप्छिन्, 'आफ्नो अन्तर्वार्ताहरुमा उनले बिन्ती गरिरेका थिए, मलाई किन यो इन्डस्ट्रीले अपनाउँदैन । मलाई यहाँ एक्लै पारियो । के सुशान्तको मृत्युमा यी कुराहरुको आधार छैन ?'
नातावादका विषयमा खरो प्रस्तुत हुँदै आएकी कंगनाले गल्ली ब्वाईजस्तो 'वाहियात' फिल्मलाई अवार्ड दिने तर सुशान्तको 'छिछोरे'लाई नजरअन्दाज गरिदिने बलिउडको वास्तविकताबारे आवाज उठाएकी छिन् । आफूलाई पनि केही व्यक्तिहरुले आत्महत्याको दुरुत्साहन गर्ने गरेको भन्दै उनले भिडियोमा भनेकी छिन्, 'उनीहरुले सुशान्तलाई भने, तिमी अयोग्य छौ, सुशान्तले त्यही ठान्यो ।'
अभिनेत्री कंगनाले नातावादबारे यसरी खरो टिप्पणी दिएपछि नेपालमा पनि यसबारे बहस सुरु भएको छ । अभिनेत्री नम्रता सापकोटाले सोमबार राति फेसबुकमा भिडियो सार्वजनिक गर्दै नेपालमा पनि नातावादको जरा गडेर बसेको बताएकी छिन् ।
'हामी बलिउडमा नातावाद छ, कलाभन्दा पनि आफ्नोलाई साथ दिन्छ भन्छौं। तर हामी नेपालकै कुरा गरौं न । नेपालमा पनि यस्ता व्यक्ति छन् जो कलाकारितालाई भन्दा पनि आफ्नालाई साथ दिन्छन्,' उनले भनेकी छिन्, 'यहाँ फिल्ममा कलाकार चाहियो भनेर घोषणा हुन्छ । अन्तमा फिल्ममा उनीहरुकै छोरा, भतिजा, भाई, बहिनी देखिन्छ ।'
उद्योगको मानिससँग राम्रो पकड भएको कलाकार नै पर्दामा देखिँदै आएको उनले बताएकी छिन् । 'जो संघर्ष गरेर इन्डस्ट्रीमा आएको हुन्छ । त्यसलाई त यहाँ गनिँदै गनिँदैन । जसको अभिनय जिरो छ, जसको लिंक छ इन्डस्ट्रीको मानिसहरुसँग उनीहरु नै पर्दामा देखिन्छन्,' नम्रताले भनेकी छिन् । यसरी आफ्नोलाई प्राथमिकता दिँदा संघर्ष गरेर इन्डस्ट्रीमा आउने कलाकार डिप्रेसनमा जाने उनको तर्क छ । 'मैले अनुभव गरेको कुरा के भने,धेरै होइन ६० प्रतिशत मानिस आफ्नोलाई बढी प्राथमिकता दिन्छन् । र कलाकारहरु डिप्रेसनमा नगएर केमा जान्छन् त ?' अभिनेत्री सापकोटा लामो समयदेखि फिल्मबाट टाढा देखिन्छिन् ।
त्यस्तै अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटीले पनि नेपाली फिल्म क्षेत्रमा नातावाद कायमै रहेको कुरा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उल्लेख गरेकी छिन् । उनी लेख्छिन्, 'नातावाद सबैतिर हुन्छ, फिल्म उद्योगमा मात्र होइन । फरक यत्ति हो कि फिल्म इन्डस्ट्रीमा छर्लङ्ग छ । सत्य बोल्ने आँट कमैको छ । किन कि यस्ता अभिव्यक्तिले भोलिका दिनमा करिअरमा असर पर्न सक्छ, कामको अभाव हुन सक्छ ।'
गत वर्ष अभिनेत्री सिवाकोटीले नातावादबारे बोलेकी थिइन् । त्यतिखेर फेसबुकमा स्टाटस लेखेकी थिइन्, 'नातावादले मात्र फिल्म क्षेत्र रुमल्लिएको छैन । यहाँ अरु थुप्रै अवस्था छन, जुन कुरामा ध्यान दिन पनि जरुरी छ, जस्तै ग्रुपिजम, लभ अफेयर्स, कम्प्यारिजन, कलाकार र युट्युबर/पत्रकारबीच अनावश्यक गुटबन्दी । यी कुराको बिगबिगीले पनि नकारात्मक असर पारेको छ ।'
त्यो बेला वर्षाले आफूलाई यी सब कुराको पीडित व्याख्या गरेकी थिइन् । उनले दिएको अभिव्यक्तिका कारण अब उनले फिल्म उद्योगमा काम नपाउनेजस्ता हल्ला पनि चलेको थियो । तर, अवस्था सामान्य हुँदो हो यतिखेर समय दिन नसकेर कति फिल्महरु छोडिसक्नुपर्ने अवस्था आउने वर्षाले लेखेकी छिन् ।
मिहिनेतका साथ काम गर्दै जाँदा यस्ता कुनै पनि वादले छुन नसक्ने उनको तर्क छ । 'तपाईं कुनै काम गर्नु हुन्छ भने पूर्ण मिहिनेत, विश्वास र समर्पणका साथ गर्नुस कि, जहाँ कुनै वादले छुन पनि नसकोस् । तपाईं प्रतिभा सम्पन्न, लगनशील र आत्मविश्वासी हुनुहुन्छ भने एकदिन अवश्य तपाईंको मिहिनेतले कदर पाउने छ । हत्केलाले सूर्यलाई छेकेर छेकिन्छ र ?'
प्रकाशित : असार २, २०७७ १५:०५